Falastiin: Ra’iisal Wasaaraha India oo markii u horreysay booqday Daanta Galbeed – Kasmo Newspaper
Falastiin: Ra’iisal Wasaaraha India oo markii u horreysay booqday Daanta Galbeed
Updated - February 11, 2018 1:07 pm GMT
London (Kasmo), Ra’iisal Wasaaraha India, Narendra Modi, ayaa maalintii Sabtida, 10kii Febraayo booqasho rasmi ah ku gaaray Daanta Galbeed isaga oo la kula kulmay Ramallah, Madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas.
Safarka Modi ee Bariga Dhexe oo Jimcihii ka soo bilowday Urdun wuxuu ku mari doonaa dalalka Imaraadka iyo Cumaan. Booqashada Modi oo noqday Ra’iial Wasaarihii u horreeyay oo Hindi ah oo aagaas booqda waxaa loo arkaa mid lagu dheellitirayo xiriirka Indiya la leedahay Falastiin iyo Israel.
Modi wuxuu 4tii July 2017 booqashadii u horreysay oo rasmi ah oo Ra’iisal wasaare Hindi ah ku tagay Israel, iyada oo sidoo kale, Benjamin Netanyahu kaga jawaabay booqasho uu ku tagay Indiya 14kii Jenaayo 2018.
Modi oo Helikobtar uga soo gudbay Urdun wuxuu Xaruntiisa Ramallah kula kulmay Madaxweyne Cabbaas oo la sheegay in ay isla soo qaadeen qodobbo ay ka mid yihiin Teknolojiyada, warfaafinta, caafimaadka iyo dalxiiska. Mas’uulka tirsan Falastiin, Nabiil Shaath ayaa shaaca ka qaaday in 2da hoggaamiye isla saxiixi doonaan heshiis iskaashi dhaqaale ah oo gaaraya ilaa $50 malyuun oo Dollar.
Sida uu qoray Wargayska Times of Israel, Cabbaas wuxuu Modi ka codsan doonaa taageerada Isbahaysiga Caalamiga ah ee beddeli doona Maraykanka oo dhexdhexaadiyaha qur ah ee geesaisocodka nabadda ahaa. Cabbaas ayaa dhankiisa ka caddeeyay in safarka Modi noqon doono fursad looga mahad celiyo India taageradii joogtada ahayd ee xuquuqda iyo halganka madaxbanaanida dadka reer Falastiin